वीरगञ्जका दुवै भन्सारले भेटेनन् राजस्व लक्ष्य | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर वीरगञ्जका दुवै भन्सारले भेटेनन् राजस्व लक्ष्य
वीरगञ्ज । आयात निर्यात कारोबारका दृष्टिले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो नाका मानिएको वीरगञ्जका दुवै भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को १० महीनामा ती भन्सार कार्यालयलाई दिइएको लक्ष्य पूरा भएन ।
गत आव २०७४/७५ को तुलनामा राजस्व असुलीको लक्ष्य बढे पनि आयात घटेकाले तोकिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत साउनदेखि वैशाखसम्ममा रू. १ खर्ब २२ अर्ब ७० करोड संकलन गरेको छ, जुन लक्ष्यको तुलनामा १२ प्रतिशत कम हो । अर्थ मन्त्रालयले वीरगञ्ज भन्सारलाई यस अवधिका लागि रू. १ खर्ब ३९ अर्ब उठाउने लक्ष्य दिएको थियो ।
राजस्वको मुख्य स्रोत मानिएको गाडी र इन्धनबाट आउने राजस्व घटेकाले समग्र राजस्व प्रभावित भएको भन्सारका सूचना अधिकृत मनीषकुमार महतोले बताए । उक्त भन्सारलाई अघिल्लो आवभन्दा यस वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्य २७ प्रतिशत बढी थियो ।
विगत १० महीनामा गाडीबाट आउने राजस्वमा
पाँच र इन्धनको २२ प्रतिशतले कमी आएको महतोले बताए । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात परिमाण पनि घटेको भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले पूँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अभाव, निर्माण सामग्रीको मागमा कमीजस्ता कारणले आयात घटेको र त्यसको नकारात्मक परिणाम राजस्व संकलनमा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि वैशाखसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७२ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएको छ । यस वर्षका लागि रू. ३६ अर्ब ९ करोड ३२ लाखको लक्ष्य राखिएकामा वैशाखसम्ममा रू. २६ अर्ब १२ करोड ७८ लाख मात्र उठेको सूचना अधिकारी विकासकुमार साहले बताए ।
यो भन्सारले गएको असोजबाहेक अरू कुनै पनि महीनामा लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । चालू आवमा आयात कारोबार नै घटेकाले राजस्वको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले बताए । ‘राजस्वको लक्ष्य बढ्यो, आयात भने घटेकाले तोकिएअनुसार असुली नभएको देखियो,’ श्रेष्ठले भने ।